Isiphathimandla - Izithasiselo ze-Magnesium L-Threonate: Izinzuzo, Isilinganiso
Ikhaya > Magnesium L-Threonate Izithasiselo
Uma ufuna okuhle Isengezo se-Magnesium L-Threonate, sincoma ukuthenga i-Magnesium Threonate powder kusuka eCofttek. Le nkampani ithi ikhulisa ukutholakala kwayo kwe-magnesium emzimbeni. Le nkampani iphinde ithi i-powder enikezwe umsebenzi wokukhumbula inkumbulo yenkampani futhi ithuthukise umsebenzi wokuqonda jikelele. Zisiza nabasebenzisi ukuthi balale kangcono. Cofttek Ngabaphakeli be-Anandamide (AEA) abazokuthengisa kahle kakhulu imikhiqizo.
I-Threonic acid iyinhlanganisela encibilikiswa ngamanzi etholakala ekuwohlokeni komzimba kwe-Vitamin C. Lapho i-threonic acid ihlangana ne-magnesium, yakha usawoti obizwa nge-Magnesium L-threonate. I-Magnesium L-threonate umuncwa kalula ngumzimba futhi ngenxa yalokho, kungenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza i-magnesium ifinyelele kumaseli obuchopho nakwezinye izingxenye zomzimba. I-magnesium enikezwe yi-Magnesium L-threonate isebenza imisebenzi eminingi ebalulekile yamakhemikhali, kufaka phakathi ukusebenza kwamavithamini B, ukuvinjelwa kwe-insulin, ukwakheka kwe-ATP namaprotheni nokwakheka kwamafutha acid. Amaminerali nawo adlala indima enkulu ekwenzeni lula ukusebenza kahle kwama-enzyme amaningana. Okubaluleke kakhulu, ithuthukisa ukusebenza kwamasosha omzimba ngokwandisa imiphumela elwa namagciwane kanye ne-anti-tumor yamaseli obulali wemvelo kanye ne-cytotoxic T-lymphocyte.
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-magnesium ingatholakala ngokudla okuningana ngokwemvelo okunothile kumaminerali. Okunye ukudla okuqukethe i-magnesium ngenani eliphakeme ushokoledi omnyama, ukwatapheya, amantongomane, imidumba, i-tofu, ithanga nembewu ye-chia, izinhlanzi ezinamafutha, njll. Noma kunjalo, i-magnesium enikezwa ngemithombo yemvelo ayivamisile ngokwanele ukuxhasa kahle imisebenzi ehlukahlukene yamakhemikhali futhi Ngakho-ke, ukuthi ukufunwa kwama-Magnesium L-threonate supplements kukhuphuke kakhulu kule minyaka embalwa edlule.
Yini i-magnesium L Threonate esetshenziselwa yona?
Ukuthenga iMagnesium L-Threonate kungenxa yezinzuzo zayo ze-nootropic. Ikhulisa inkumbulo ye-episodic, ukufunda, nokwenza ngcono ukugxila. Isengezo singumthamo kadokotela ezigulini ezinokulahleka kwememori okuhlobene nobudala, i-ADHD, ukuwohloka komqondo, nesifo i-Alzheimer's.
Okuxhunyanwa bazuzeswe-Magnesium L-Threonate ukuthuthuka kwememori. Iyakwazi ukuthuthukisa ukuminyana kwe-synaptic kanye ne-plasticity kanye nokwandisa inani eliphelele lezindawo zokukhishwa kwe-neurotransmitter ngaphakathi kobuchopho.
Lesi sengezo futhi siyakwazi ukuthuthukisa inkumbulo yendawo. Kwisifundo esisodwa segundane, inkumbulo yokusebenza ithuthuke ngo-13% ngemuva kwezinsuku ezingama-24 zokuthatha iMagneisum L-Threonate. Ngemuva kwezinsuku ezingama-30 zokulekelelwa, amagundane asekhulile akwazi ukwenza ezingeni elifanayo nozakwabo abancane.
Lokhu kusho ukuthi ngenkathi lesi sithasiselo sikwazi ukwenza umsebenzi wokuqonda kahle ezifundweni zobusha nezindala, sithuthukise kakhulu kubantu asebekhulile. Eqinisweni, amagundane amadala abone izinga lokuthuthuka le-19%, okubalulekile uma kuqhathaniswa nokuthuthuka okungu-13% kwamagundane amancane. Njengoba kunikezwe ukuthi abantu asebekhulile maningi amathuba okuthi bahlupheke ngokulahleka kwememori, lesi sengezo sinemithelela enamandla kubantu asebekhulile.
Ngabe i-magnesium Threonate ingcono?
IMagnesium L-threonate ingaba ifomu le-magnesium elifanele kuwe uma ufuna ukuthuthukisa impilo yobuchopho ikakhulukazi. Ngenkathi ingahle ikhulise amazinga e-magnesium emzimbeni wonke, imiphumela ingaqina ngokwengeziwe ebuchosheni ngale ndlela ye-magnesium.
Ingabe i-magnesium Glycinate ingcono kune-magnesium citrate?
Ngenkathi kunezinhlobo eziningi ze-magnesium etholakalayo, sivame ukukhetha ukusebenzisa i-magnesium citrate kanye / noma i-magnesium glycinate. I-Magnesium citrate iyasiza kakhulu kubantu abaphethwe ukuqunjelwa, kuyilapho ifomu le-glycinate liwusizo kakhulu ezimeni ezinjengokukhathazeka, ukuqwasha, ukucindezeleka okungapheli nezimo zokuvuvukala.
Yimiphi imithi okungafanele uyiphuze nge-magnesium?
Ukuthatha i-magnesium ngale mithi kungadala ukuthi umfutho wegazi wehle kakhulu. Eminye yale mithi ifaka phakathi i-nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc), neminye.
Ingabe i-magnesium yenza indle?
I-Stool Softener: I-Magnesium idonsela amanzi emathunjini, isebenza njenge-laxative osmotic. Lokhu kwanda kwamanzi kuvusa isisu samathumbu. Iphinde ithambise futhi inyuse usayizi wendle, ivuse ukunyakaza kwamathumbu futhi isize ukwenza indle kube lula ukudlula.
Mangaki ama-magnesium L Threonate okufanele ngiwathathe?
I-Magnesium L-threonate iyisidakamizwa somlomo futhi ingathathwa ngendlela yamaphilisi noma i-powder. Umthamo ofanele weMagnesium L-threonate noma umuthi uncike ebudaleni nasempilweni yomuntu owuthathayo kanye nangenhloso yomuthi othathwe ngawo. Ngokuvamile, abesifazane abaneminyaka ephakathi kuka-19 no-30 banconyelwa ukunamathela kumthamo ka-310 mg ngosuku futhi abesilisa abasebangeni elifanayo kufanele banamathele kumkhawulo wokulinganisa ka-400 mg ngosuku. Amadoda amadala angakhuphula umthamo wawo afike ku-420 mg ngosuku futhi abesifazane abakulelo qembu lobudala kufanele badle ama-360 mg we-Magnesium L-threonate nsuku zonke ukuthola imiphumela emihle. Abesifazane abancelisa ibele nabo bangawudla lo muthi. Kodwa-ke, kufanele bagcine ukudla kwabo kwansuku zonke kweMagnesium L-threonate ngaphansi kuka-320 mg ngosuku.
Uma uthatha i-Magnesium L-threonate ukuthola izimo ezithile, kuzodingeka ukuthi uguqule umthamo wakho ngokususelwa kunhloso umuthi owuphuzwayo. Isibonelo, uma uthatha iMagnesium L-threonate ngezinto ezihlobene nokugaya, kunconywa ukuthi uthathe u-400-1200 mg nsuku zonke. Uma uthatha isengezo ukuthuthukisa umsebenzi wokuqonda, kufanele usebenzise i-1000 mg ye-Magnesium L-threonate nsuku zonke. Ukulala kahle, i-400-420 mg ye-Magnesium L-threonate yanele emadodeni futhi i-310 kuya ku-360 mg yanele kwabesifazane.
Iyiphi iMagnesium engcono kakhulu ekukhathazekeni?
Imagnesium ivame ukuboshelwa kwezinye izinto ukuze yenze kube lula emzimbeni ukuthi uyimunce. Izinhlobo ezahlukahlukene ze-magnesium zihlukaniswe ngokwezi zinto ezihlanganisayo. Izinhlobo ezahlukene ze-magnesium zifaka:
Magnesium glycinate. Imvamisa isetshenziselwa ukunciphisa ubuhlungu bemisipha.
Magnesium oxide. Imvamisa isetshenziselwa ukwelapha i-migraines nokuqunjelwa.
I-Magnesium citrate. Umuncwa kalula ngumzimba futhi usetshenziselwe ukwelapha ukuqunjelwa.
Magnesium chloride. Kumuncwa kalula umzimba. S
Magnesium sulfate (Epsom usawoti). Ngokuvamile, umzimba umuncwa kalula kepha ungamunca isikhumba.
I-Magnesium lactate. Imvamisa isetshenziswa njengesengezo sokudla.
Ngokuya ngokubuyekezwa kwezifundo zango-2017, iningi lezifundo ezifanele kwi-magnesium nokukhathazeka zisebenzisa i-magnesium lactate noma i-magnesium oxide. I-Magnesium glycinate ithathwa kalula futhi ingahle ibe nezindawo zokwehlisa umoya. Kungasiza ekunciphiseni ukukhathazeka, ukucindezeleka, ukucindezeleka nokuqwasha. Noma kunjalo, ubufakazi besayensi kulokhu kusetshenziswa kunqunyelwe, ngakho-ke kudingeka izifundo eziningi. I-Magnesium glycinate ivame ukusetshenziselwa imiphumela yayo yokwehlisa ukukhathazeka, ukudangala, nokuqwasha.
Ngabe i-magnesium ingasiza ngenkungu yobuchopho?
Okujwayele ukubizwa ngokuthi yinkungu yobuchopho, ukuqonda kancane noma ubunzima bokugxila nenkumbulo konke kungakhombisa ukuswela kwe-magnesium. I-Magnesium yisakhi somzimba esibalulekile ebuchosheni, ngakho-ke ngaphandle kwayo ubuchopho abukwazi ukusebenza kahle.
Ingabe i-magnesium iyaphilisa ubuchopho?
IMagnesium isebenza njengomgcini-sango wama-receptors we-NMDA, abandakanyeka ekukhuleni kobuchopho okunempilo, inkumbulo nokufunda. Kuvimbela amangqamuzana ezinzwa ukuba angabi ngaphezu kwamandla, okungawabulala futhi kungadala ukulimala kobuchopho.
Ingabe i-magnesium ibangela ukuwohloka komqondo?
Ucwaningo olusha olushicilelwe ephephabhukwini iNeurology luphakamisa ukuthi womabili amazinga aphakeme kakhulu futhi aphansi kakhulu we-magnesium angafaka abantu engcupheni yokuthola ukuwohloka komqondo.
Ngabe i-magnesium L Threonate ilungele ukucindezelwa kwegazi?
Lolu hlobo lwe-magnesium lungangena egazini futhi lunqamule isithiyo sakho sobuchopho begazi, lumuncwa kalula amaseli futhi kufakazelwe ukuthi lwehlise umfutho wegazi futhi luvimbele nokushaywa unhlangothi.
Iyiphi i-magnesium engcono kakhulu ongayithatha nsuku zonke?
I-Magnesium citrate ingenye yezindlela ezivame kakhulu ze-magnesium futhi ingathengwa kalula ku-inthanethi noma ezitolo emhlabeni jikelele. Olunye ucwaningo luphakamisa ukuthi lolu hlobo luphakathi kwezinhlobo ze-magnesium ezingatholakali kakhulu, okusho ukuthi lungena kalula kumgudu wakho wokugaya ukudla kunezinye izinhlobo.
Uyini umehluko phakathi kwe-magnesium citrate ne-magnesium gluconate?
I-Magnesium citrate iyasiza kakhulu kubantu abaphethwe ukuqunjelwa, kuyilapho ifomu le-glycinate liwusizo kakhulu kwizimo ezinjengokukhathazeka, ukuqwasha, ukucindezeleka okungapheli nezimo zokuvuvukala.
Iyiphi iMagnesium engcono kakhulu kumajaqamba emisipha?
magnesium i-citrate ingaba uhlobo oluphumelela kakhulu uma ufuna ukuzama isengezo. Uma untula i-magnesium, kungahle kube nezinye izinzuzo ngokukhuphula ukudla kwakho kwalesi sakhi. Futhi amanye amakhambi atholakalayo wokucinana kwemilenze okungasiza.
Ngabe iMagnesium ilungele ukukhathazeka?
Ucwaningo lubonisa ukuthi ukuthatha i-magnesium ngokukhathazeka kungasebenza kahle. Ucwaningo luthole ukuthi imizwa yokwesaba nokwethuka kungancishiswa kakhulu ngokudla okukhulu kwe-magnesium, futhi izindaba ezimnandi ukuthi imiphumela ayigcini ekukhathazekeni okujwayelekile.
Iyiphi iMagnesium engcono kakhulu yokulala?
I-Magnesium glycinate ivame ukusetshenziswa njengesengezo sokudla esizimele ukwenza ngcono ukulala nokwelapha izimo ezahlukahlukene zokuvuvukala, kufaka phakathi isifo senhliziyo nesifo sikashukela. I-Magnesium glycinate ithathwa kalula futhi ingahle ibe nezindawo zokwehlisa umoya. Kungasiza ekunciphiseni ukukhathazeka, ukucindezeleka, ukucindezeleka nokuqwasha.
Iziphi izinto zokudla eziphakeme nge-magnesium?
Ngaphandle kokuthatha iMagnesium L-threonate ukuthuthukisa amazinga we-magnesium ebuchosheni bakho, ungasebenzisa nokudla okunothile kulawa amaminerali. Lokhu kudla kungakusiza ukuthi uthole amazinga adingekayo we-magnesium engqondweni yakho futhi ujabulele zonke izinzuzo zamaminerali. Nazi ezinye ze- I-Magnesium L-threonate ekudleni;
Chocolate Emnyama - noma ngabe imnandi futhi iphilile, ithwala i-64mg ye-magnesium eyi-16% ye-RDI. Ngaphandle kwalokho, ushokoledi omnyama ucebile nangethusi, i-iron, ne-manganese kanye ne-prebiotic fiber.
Ukwatapheya - lesi sithelo esimnandi futhi esinomsoco singakunika i-58mg ye-magnesium eyi-15% ye-RDI. Isithelo futhi sinothe ngamavithamini B, K, nomthombo omkhulu we-potassium.
INutsare– eyaziwa nangokuthi ingenye yemithombo yemvelo yeMagnesium L-threonate. I-1-ounce ekhonza ama-cashews ane-82mg magnesium eyi-20% ye-RDI.
Ama-legumessuch- njengophizi, udali, opelepisi, nobhontshisi wesoya anothe ngamaminerali ahlukene, kufaka phakathi i-magnesium. Isibonelo, inkomishi eyodwa kabhontshisi ophekiwe iqukethe i-120mg ye-magnesium, futhi lokho kungama-30% we-RDI.
Iyini imiphumela yesikhathi eside yokuthatha i-magnesium?
I-Magnesium yisakhi somzimba esidinga umzimba ukuze uhlale uphilile. Ukuthatha iMagnesium isikhathi eside kubalulekile ezinqubweni eziningi emzimbeni, kufaka phakathi ukulawula ukusebenza kwemisipha nezinzwa, amazinga kashukela egazini, nomfutho wegazi nokwenza amaprotheni, ithambo, ne-DNA.
Ngabe yonke i-magnesium ibanga isifo sohudo?
Izinhlobo ze-magnesium ezivame ukubikwa ukuthi zidala isifo sohudo zifaka phakathi i-magnesium carbonate, i-chloride, i-gluconate, ne-oxide. Uhudo nemiphumela yokulahla isisu kasawoti we-magnesium kungenxa yomsebenzi we-osmotic wosawoti ongavunyelwe emathunjini nakwikholoni nasekugqugquzelweni kokuhamba kwesisu.
Ngabe i-magnesium L Threonate ithatha isikhathi esingakanani ukusebenza?
I-MgT efakwe ngomlomo ikhonjisiwe ukuthi ithathe okungenani inyanga eyodwa ukukhuphula amazinga we-magnesium wobuchopho ezingeni elidingekayo ukuze kube nomthelela ekwakhekeni kwememori.
Ingabe i-magnesium ibangela i-Alzheimer's?
Ukuba namazinga we-magnesium aphakeme kakhulu noma aphansi kakhulu angakubeka engcupheni ye-Alzheimer's nezinye izifo zomqondo, abacwaningi baseDashi babika.
Ziyini izimpawu ze-magnesium ephansi?
Lapho izinga le-magnesium emzimbeni lehla ngaphansi kokujwayelekile, izimpawu ziyakhula ngenxa ye-magnesium ephansi. Izimbangela ezivamile ze-magnesium ephansi zifaka:
Ukusha okuthinta indawo enkulu yomzimba
Ukuchama ngokweqile (i-polyuria), njengesifo sikashukela esingalawuleki nangesikhathi sokululama ngenxa yokwehluleka okukhulu kwezinso
I-Hyperaldosteronism (ukuphazamiseka lapho i-adrenal gland ikhipha i-hormone aldosterone eningi kakhulu egazini)
Ukuphazamiseka kwesifo sezinso
Ama-syndromes kaMalabsorption, njengesifo se-celiac kanye nesifo samathumbu esivuthayo
Imithi ehlanganisa i-amphotericin, i-cisplatin, i-cyclosporine, i-diuretics, i-proton pump inhibitors, kanye ne-aminoglycoside antibiotics
I-Pancreatitis (ukuvuvukala nokuvuvukala kwamanyikwe)
Ngabe i-vitamin D ingavimbela i-Alzheimer's?
Ukuhlolwa kwezilwane kanye ne-in vitro kusikisela ukuthi uvithamini D unamandla okwelapha okuvimbela nokwelashwa kokuncipha kwengqondo nokuwohloka komqondo. Izifundo ezimbili ezisanda kwenziwa ziphinde ziphakamise ukuthi amazinga aphansi angama-25 (OH) D akhulisa ubungozi bokuncipha kwengqondo okukhulu.
Iyiphi iMagnesium engcono kakhulu emithanjeni?
Umenzi uthi isengezo se-magnesium sisiza ekulweni nobuhlungu bemisipha, sithuthukise ikhwalithi yokulala, futhi sinciphise ukukhathazeka nengcindezi. Baphinde bachaze ukuthi le fomu ye-magnesium (i-magnesium bisglycinate) ithambile esiswini kunezinye izinhlobo zamaminerali.
Kungcono ukuthatha i-magnesium ekuseni noma ebusuku?
Izengezo zeMagnesium zingathathwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, inqobo nje uma ukwazi ukuzithatha ngokungaguquguquki. Kwabanye, ukuthatha izithako zokuqala ekuseni kungaba lula, kanti abanye bangathola ukuthi ukubathatha ngesidlo sakusihlwa noma ngaphambi nje kokulala kubasebenzela kahle.
Ngabe iMagnesium ilungele izinzwa ezicijile?
I-Magnesium — i-mineral ebalulekile yezempilo yezinhlelo zezinzwa nokunciphisa ukuvuvukala.
Izengezo zeMagnesium (Mg) zikhonjisiwe ukuthi zithuthukise kakhulu ukutakula okusebenzayo ezinkingeni ezahlukahlukene zezinzwa. Izinzuzo ezibalulekile zokwengezelwa kwe-Mg ekuphazamisekeni kwemizwa yezinzwa azikacaci okwamanje.
Ngabe i-magnesium ingakusiza ukuthuthumela?
Izimpawu ezijwayelekile zokushoda kwe-magnesium zifaka ukuvuvukala kwemisipha, ukundindizela kanye nezinsika Kodwa-ke, izengezo akunakwenzeka ukuthi zinciphise lezi zimpawu kubantu abangantuli.
Ngabe iMagnesium ilungele iParkinson's?
Isifundo Sokuqala SaseParkinson Sithola Ifomu Le-Magnesium Elikwazi Ukufinyelela Ebuchosheni Okunciphisa Izimoto, Ukulahlekelwa kwe-Neuronal
Ziyini izimpawu ze-magnesium ephansi emzimbeni?
Izimpawu zokuqala ze-magnesium ephansi zifaka:
Njengoba ukuntuleka kwe-magnesium kuya kuba kubi, izimpawu zingafaka:
isigqi senhliziyo esingajwayelekile
Ingabe i-turmeric iyasiza isifo sikaParkinson?
Ocwaningweni olushicilelwe ku-Experimental and Therapeutic Medicine, abacwaningi bathole ukuthi i-turmeric ingavikela uhlelo lwezinzwa kubuthi obuthintekayo odala ukonakala kwesistimu yezinzwa esifo sikaParkinson.
Yini ebhebhethekisa isifo sikaParkinson?
Izinguquko zemithi, ukutheleleka, ukungabi namanzi emzimbeni, ukuncishwa ubuthongo, ukuhlinzwa kwakamuva, ingcindezi, noma ezinye izinkinga zezokwelapha kungazenza zibe zimbi izimpawu ze-PD. Ukutheleleka ngomgudu womchamo (noma ngaphandle kwezimpawu zesinye) kuyimbangela ejwayelekile. ICEBISO: Imithi ethile ingazenza zibe zimbi izimpawu ze-PD.
Ingabe i-magnesium iyayithinta inkumbulo?
Ucwaningo olusha lukhombisa ukuthi ukwandisa ukudla kwakho kwe-magnesium, okumbiwa phansi okubalulekile okutholakala kwimifino enamaqabunga amnyama nezithelo ezithile, ubhontshisi, namantongomane, kungasiza ekulweni nemikhawulo yememori ehambisana nokuguga.
Ingabe i-magnesium iyasiza nge-oxygen?
Enye yezindima zayo ezibaluleke kakhulu ukusiza ekwakheni ukukhuthazela ngokwandisa umthamo womoya-mpilo womzimba. Kepha kuyasiza futhi: Umfutho wegazi onempilo.
Ingabe i-magnesium ikhulisa i-serotonin?
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukwengeza nge-magnesium kungasiza ukukhuphula amazinga e-serotonin. Eqinisweni, amazinga aphansi e-serotonin abonwe ezigulini ezinesifo se-magnesium. Ucwaningo oludingida ukukhulisa i-serotonin nge-magnesium lubike impumelelo.
Ingabe i-magnesium inika amandla?
IMagnesium idlala izindima eziningi ezibalulekile emzimbeni, njengokuxhasa ukusebenza kwemisipha nezinzwa nokukhiqizwa kwamandla. Amazinga we-magnesium aphansi awazibangeli izimpawu esikhathini esifushane. Kodwa-ke, amazinga aphansi angakhuphula ingozi yomfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo, uhlobo lwesifo sikashukela kanye ne-osteoporosis
Yini i-magnesium L engcono kakhulu?
Ama-Gummies we-Vitality Yemvelo.
MANJE Ukudla Magnesium Citrate Veg Capsules.
Amavithamini we-Vitafusion Magnesium Gummy.
Isandiso Sempilo Neuro-Mag Magnesium L-Threonate.
Ukwamukela Okuphezulu Okuphezulu KweDokotela I-100% ye-Chelated Magnesium Tablets.
Kungani i-magnesium glycinate ingcono?
IMagnesium glycinate ikhonjisiwe ukuthi inezinzuzo ezahlukahlukene, kufaka phakathi okulandelayo: Inomphumela wokuthoba ebuchosheni bakho ngenxa yokuba khona kwe-glycine. Kungasiza ekunciphiseni ukukhathazeka futhi kuthuthukise ukulala okungcono. Kuyasiza ukugcina amathambo aqinile ngokugcina ukuminyana kwamathambo okunempilo.
Ingabe i-magnesium Glycinate iyefana ne-magnesium?
Kunezinhlobo eziningi ze-magnesium ezitholakalayo, sivame ukukhetha ukusebenzisa i-magnesium citrate kanye / noma i-magnesium glycinate. Ifomu le-Magnesium glycinate liwusizo kakhulu ezimweni ezifana nokukhathazeka, ukuqwasha, ukucindezeleka okungapheli nezimo zokuvuvukala.
Ingabe i-magnesium Glycinate ikusiza ukungcolisa?
I-Magnesium glycinate olunye uhlobo olukhulu lwe-magnesium yokulala. Kuyindlela efakwe kahle kakhulu ye-magnesium, futhi emnene esiswini, ngakho-ke mancane amathuba okuba nemiphumela yokulahla isisu noma ukucasula isisu sakho.
Yini i-magnesium glycinate esetshenziselwa ukwelashwa?
Lo muthi uyisengezo samaminerali esisetshenziselwa ukuvimbela nokwelapha amanani aphansi we-magnesium egazini. Eminye imikhiqizo isetshenziselwa ukwelapha izimpawu ze-asidi eningi esiswini njengokuphazamiseka kwesisu, isilungulela, kanye ne-acid indigestion.
Yini okungafanele uyithathe nge-magnesium?
Yize izithasiselo ze-magnesium ngokuvamile zibhekwa njengephephile, kufanele ubheke umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngaphambi kokuzithatha - ikakhulukazi uma unesimo sempilo. Isengezo samaminerali singaphepha kubantu abathatha isisu esithile, imishanguzo yenhliziyo, noma ama-antibiotic.
Kufanele ungayithathi nini i-magnesium?
Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uma uthatha noma imuphi umuthi ngaphambi kokuthatha i-magnesium. Izingozi. Abantu abanesifo sikashukela, isifo samathumbu, isifo senhliziyo noma isifo sezinso akufanele bathathe i-magnesium ngaphambi kokukhuluma nomhlinzeki wabo wezempilo.
Ngazi kanjani ukuthi ngiphansi nge-magnesium?
Esinye sezibonakaliso zokuqala zokushoda kwe-magnesium kuvame ukukhathala. Ungaqaphela ukuphazamiseka kwemisipha, ubuthakathaka noma ukuqina futhi. Ukulahlekelwa isifiso sokudla kanye nesicanucanu ngezinye zezimpawu ezivamile ezigabeni zokuqala. Kodwa-ke, ungahle ungaboni zimpawu nhlobo ekuqaleni.
Kufanele ngithathe isikhathi esingakanani ngaphambi kokulala?
Uma uhlela ukusebenzisa izengezo ze-magnesium njengesizo lokulala, sincoma ukuthi uthathe amahora angu-1-2 ngaphambi kokuya embhedeni. Cabanga ngokungeza i-magnesium esimisweni sakho sokulala.
Yimaphi amavithamini okungafanele uwathathe ndawonye?
Imithamo emikhulu yamaminerali ingancintisana ukuze ifakwe. Ungasebenzisi izithako ze-calcium, zinc, noma i-magnesium ngasikhathi sinye.
Ingabe i-magnesium L Threonate ilungele ukukhathazeka?
I-Magnesium L Threonate Ukuphakamisa kungathuthukisa imizwa, ukucindezela okukhulu, futhi kwehlise ukukhathazeka. Ngaphezu kwalokho, iphepha elihlukile elishicilelwe ephephabhukwini i-Pain Physician lithole ukuthi i-magnesium L-threonate ivimbela futhi iguqule ukushiyeka kwememori okuhambisana nobuhlungu obungapheli be-neuropathic.
Yiluphi uhlobo lwe-magnesium olungcono kakhulu?
Amafomu we-magnesium ancibilika kahle kuketshezi angena ngokuphelele emathunjini kunezindlela ezingancibiliki kakhulu. Ucwaningo oluncane luthole ukuthi i-magnesium ku-aspartate, i-citrate, i-lactate, ne-chloride amafomu amuncwa ngokuphelele futhi ayatholakala kakhulu kune-magnesium oxide ne-magnesium sulfate.
Ngingathatha i-magnesium isikhathi eside?
Imithamo engaphansi kwama-350 mg nsuku zonke iphephile kubantu abadala abaningi. Kwabanye abantu, i-magnesium ingadala ukucasuka kwesisu, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, neminye imiphumela emibi. Uma ithathwa ngamanani amakhulu kakhulu (angaphezu kwama-350 mg nsuku zonke), i-magnesium i-POSSIBLY UNSAFE.
Ingabe i-magnesium ikuthinta kanjani ukuhamba kwamathumbu?
Kufanele uthathe kangaki ngosuku i-magnesium?
IMagnesium iyimbiwa ebalulekile ebandakanyeka ezicini eziningi zempilo yakho. INational Academy of Medicine incoma ukuthi ingeqi ku-350 mg we-magnesium eyengeziwe ngosuku. Akunandaba noma ngabe uthatha i-magnesium ukuthuthukisa umzimba wakho nganoma yisiphi isikhathi sosuku, inqobo nje uma ukwazi ukuwathatha ngokungaguquguquki.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuthola i-magnesium?
ukunciphisa noma ukugwema ukudla okunothe nge-calcium amahora amabili ngaphambi noma ngemuva kokudla ukudla okunothe nge-magnesium.
ukugwema izithako ezinomthamo omkhulu we-zinc.
ukwelapha ukuntuleka kukavithamini D.
ukudla imifino eluhlaza kunokuyipheka.
Kungani Sidinga I-Magnesium L-Threonate?
I-Magnesium ingukumbiwa obalulekile futhi umzimba uyisebenzisa ekushintsheni kwemetaboliki ehlukahlukene engama-300. Luyinto yesine egcwele kakhulu emzimbeni womuntu. Umzimba usebenzisa i-magnesium yokulawula umfutho wegazi, ukusikwa kwemisipha, ukuhanjiswa kwesiginali yezinzwa nokukhiqizwa kwamandla. Njengoba i-magnesium iyimbiwa ebucayi kangako, ukusweleka kwayo kungaholela ezifweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-migraines, isifo sikashukela sohlobo 2, ukuphazamiseka kwemizwa kanye nezifo zenhliziyo ezihlukile. Ngenkathi le mineral ingatholakala kwimithombo yemvelo ehlukahlukene, kufaka phakathi imifino, amantongomane, imbewu nemidumba, ingxenye yesithathu yabantu bomhlaba ihlushwa ukuntuleka kwayo. Ngakho-ke, abantu bavame ukululekwa ukuthi basebenzise i-magnesium ngendlela yezengezo. Isengezo esisodwa esinjalo esidume ukuthandwa okukhulu esikhathini esedlule esedlule iMagnesium L-threonate.
Kulesi sihloko, sikutshela konke okwaziyo mayelana neMagnesium L-threonate nokuthi kungani kufanele uyisebenzise. Ngakho-ke, qhubeka uqhubeke.
Yini iMagnesium L-threonate Side Effect?
Ucwaningo lukhombisa ukuthi iMagnesium L-threonate iphephile futhi ibekezelelwa kahle ngumzimba uma uthathwa kumthamo ungaphansi kwama-350 mg ngosuku. Kodwa-ke, ukwanda kakhulu kweMagnesium L-threonate kungaholela emiphumeleni emibi, njengokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukugabha, njll. Uma uhlangabezana nanoma yiziphi zalezi zimpawu, bonana nodokotela noma wehlise inani lakho lomthamo. I-Magnesium L-threonate, uma ithathwa ngenani elikhulu, inyusa ukwakhiwa kwe-magnesium ngaphakathi komzimba, okuholela ezimweni ezinjengomfutho wegazi ophansi, ukukhuphuka kwenhliziyo, ukubambezela ukuphefumula, njll. Ngakho-ke, kungcono ngaso sonke isikhathi ukubonana nodokotela wakho ngaphambi kokuqala Isengezo se-Magnesium L-threonate. Lesi sidakamizwa siphephile kubantu besifazane abakhulelwe nabancelwayo kanye nezingane uma sithathwa ngamanani omthamo ophansi.
Ziyini izinzuzo zeMagnesium L-threonate?
Ake sibheke ezinye zezinzuzo zeMagnesium L-threonate bese uzama ukuqonda ukuthi kungani lo mthombo we-magnesium uthokozela ukuthandwa okuphezulu kangaka.
① I-Magnesium L-threonate Ngokuphumelelayo Ukulwa ne-ADHD
Esinye sezizathu ezisemqoka sokuthandwa kweMagnesium L-threonate yikhono layo lokuthuthukisa amazinga we-magnesium ngaphakathi kobuchopho. Njengoba lo usawoti umuncwa kalula ngumzimba, kuyindlela ephumelelayo yokwenza i-magnesium ifinyelele kumaseli obuchopho. IMagnesium idlala indima enkulu ekwandiseni impilo yokuqonda - iyakwazi ukubuyisela emuva izimpawu zokuguga kobuchopho, njenge-ADHD noma ukuphazamiseka kokunaka. Njengoba i-ADHD yisimo esithatha isikhathi ukukhula, abantu abaqapheli ukuthi bane-ADHD ize ifinyelele eqophelweni lapho kuba nzima ukubhekana khona. IMagnesium L-threonate, ngakho-ke, idlala indima enkulu ekufukuleni impilo yengqondo, ikakhulukazi esimweni sabadala nokugcina i-ADHD ingekho. (1). ILanga, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016).
② Kuyisengezo Esimangalisayo Sokukhumbula Nokuqonda
Lapho abantu bekhula, ubuchopho babo nabo buqala ukuncipha ngosayizi. Lokhu kwenzeka ngenxa yokulahleka kwama-synapses kanye nemiphumela ekwehleni kwengqondo okuhlobene nobudala. Ucwaningo olwenziwe eminyakeni edlule luye lwabonisa ukuthi iMagnesium L-threonate ithuthukisa ukuqina kwama-synapses ngaphakathi kobuchopho, okubuye kuholele kwinkumbulo engcono nokusebenza kwengqondo. Ngamazwi alula, i-magnesium enikezwe yi-Magnesium L-threonate ingabuyisela ukuguga kobuchopho futhi, ngakho-ke, ingeza impilo yengqondo, ikakhulukazi kubantu abadala.
③ Isiza Ukulwa Nokucindezeleka kanye Nexhala
Ukudangala nokukhathazeka kube yinkinga ejwayelekile. Isimo sokungaqiniseki esidalwe yibhubhane yamanje yeCOVID-19 senze lezi zingqinamba zivame kakhulu kunangaphambili. Ucwaningo luye lwabonisa ukuxhumana okuthile phakathi kwe-magnesium nokudangala nokukhathazeka. Njengoba i-magnesium ithinta ngqo uhlelo lwezinzwa, ingenza umuntu azizwe ekhululeke futhi aphumule. Ngakho-ke, i-magnesium L-threonate ingadlala indima enkulu ekwehliseni ukudana nokukhathazeka.
④ Kukhulisa Amathambo Nemisipha Health
Ukushoda kwe-Magnesium kubuye kuxhunyaniswe namathambo nemisipha ebuthakathaka kanye nemisipha. Ngakho-ke, abantu abaphethwe yi-osteoporosis bavame ukululekwa ukuthi bathathe iMagnesium L-threonate njengesengezo se-magnesium. Ngaphezu kwalokho, lokhu kusawoti kuvame ukululekwa njengodokotela abahlinzayo abasebenza ngobuhlungu.
⑤ I-Magnesium L-Threonate Isiza Abantu Ukulala Kakhulu
Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi ukuze umuntu alale kahle kufanele abe nenani elifanele le-magnesium emzimbeni wakhe. I-Magnesium yenza kusebenze uhlelo lwezinzwa lwe-parasympathetic, oluqabula umzimba wonke. Okubaluleke nakakhulu, i-magnesium ihlangana nama-GABA receptors ngaphakathi komzimba futhi yehlise isimiso sezinzwa zomuntu, ngaleyo ndlela ivumele ingqondo nomzimba ukuthi uzizwe ukhululekile. I-Magnesium L-threonate iqinisekisa ukuthi kukhona i-magnesium eyanele emzimbeni ukuqinisekisa ubusuku bokulala okuzwakalayo.
Ngaphandle kwazo zonke izinzuzo ezichazwe ngenhla, iMagnesium L-threonate nayo isetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene. Lokhu usawoti kunikezwa ukudambisa izinhlungu ngemuva kwe-hysterectomy. Iphinde isetshenziselwe ukudambisa izinhlungu zesifuba ezibangelwa yimithambo evalekile. Okokugcina, lokhu kusawoti kukhonjisiwe futhi ukusiza ekulahlekelweni kwezindlebe, i-fibromyalgia kanye nesifo sikashukela. Abanye abantu bayithatha kuze yehlise amazinga abo e-cholesterol.
Ngingayithenga kuphi i-magnesium L Threonate?
Uma ufuna ukungena ku-Magnesium L-threonate supplement, udinga umphakeli wezinto zokusetshenziswa onokwethenjelwa futhi onokwethenjelwa. Uma ufuna indawo yokuthenga iMagnesium L-threonate powder ngobuningi, thenga eCofttek. Le nkampani yaziwa ngaphakathi embonini ye-biomedical ngamakhono ayo wokuhlola wokuhlaziya kanye namakhono ocwaningo lwekhwalithi. ICofttek futhi inethimba labaphathi abanolwazi neqembu le-R & D lesigaba sokuqala elinochwepheshe abavela emhlabeni wonke.
ICofttek yasungulwa ngonyaka we-2008 futhi kungakapheli neminyaka nje embalwa, inkampani izakhele igama ngeziqephu ezahlukahlukene, kufaka phakathi ubuchwepheshe bokwenza, ukukhiqizwa kwezidakamizwa, ukwenziwa kwezinto eziphilayo, ikhemisi yezemithi, njll. Namuhla, inkampani inamakhasimende eNyakatho Melika, eNdiya I-China ne-Europe kanye nenqubomgomo yayo ye-'Quality Basis, Customer First, Service Honest, Mutual Benefit 'iyisizile yakha amakhasimende ajabule emhlabeni jikelele. IMagnesium L-threonate enikezwe yinkampani iza ngemigqomo yama-25 kgs futhi umkhiqizo ngamunye ungathenjwa ngekhwalithi ephezulu yawo. Ngakho-ke, uma udinga i-Magnesium L-threonate powder ngobuningi, thenga ku-cofttek.com.
Ngabe i-calcium ne-magnesium kufanele zithathwe ndawonye noma ngokwehlukana?
Njengoba i-magnesium isebenza eduze ne-calcium, kubalulekile ukuthi kube nesilinganiso esifanele samaminerali womabili ukuze asebenze kahle. Umthetho omuhle wesithupha isilinganiso se-2: 1 calcium-to-magnesium. Isibonelo, uma uthatha i-calcium engu-1000mg, kufanele futhi uthathe i-500mg ye-magnesium.
(1). ILanga, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Ukulawulwa kokuqina kwesakhiwo nokusebenza kwe-synapse ngo-L-threonate ngokusebenzisa ukuguquguquka kokuhlushwa kwe-intraneuronal magnesium. I-Neuropharmacology, 108, 426-439.
(2). UMazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Umsebenzi weCatalase (CAT), ALT kanye ne-AST kuzinhlaka ezihlukile zamagundane aseSwitzerland Albino Aphathwe nge-Lead Acetate, Vitamin C neMagnesium-L-Threonate. Ijenali Yocwaningo Lwemitholampilo Nokuxilonga, 11 (11).
(3). UMickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Ijubane lokudla okungapheli le-magnesium-L-threonate linciphisa futhi linciphise ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kokuphikisana nokunambitheka okunesimo. I-Pharmacology Biochemistry kanye nokuziphatha, 106, 16-26.
Kungenza ngizizwe ngigula ekhanda. Sizozama ukwehlisa umthamo
Ngithuthukise inkumbulo yesikhathi esifushane neyesikhathi eside, futhi ngiba nokulinganisela ngezindlela eziningi. Ngiphinde ngithole ukukhuthazwa okuncane kwe-dopamine nokuqiniswa okuncane kwe-testosterone okuhlala kungaguquguquki futhi kunciphe kancane. Ukulala kungathuthukiswa ngokwanele ukwenza amahora we-7 azizwe njenge-9 kepha i-mag glycinate iyangixaka leso sitatimende kimi kepha ngisemi ngemuva, okunye, ukuthuthukisa ukulala.
IMagnesium L-threonate (MgT) iyi-micronutrient esebenzayo yokuthuthukisa ukusebenza, ukunaka kanye nenkumbulo ye-episodic, ukusebenza okuphezulu kokuqonda, nokunciphisa ukucindezeleka nokukhathazeka okuphelele.
Abanye odokotela bancoma ukuthi bengeze i-2000 mg yeMagnesium ukulwa nokudangala.
Kuhle lokho, ngize ngabona ukuthi iMagnesium L-Threonate isebenza kangcono ekungeneni kweBBB (Igazi, Ubuchopho, Isithiyo). Lokhu kukalwe ngamazinga we-Magnesium ku-cerebral spinal fluid. Ngiyithatha njengenkumbulo nokucindezeleka.
Howdy! Le ndatshana ibingabhalwa kangcono kakhulu! Ukubheka lokhu okuthunyelwe kungikhumbuza umuntu engangihlala naye ngaphambili! Waqhubeka eshumayela ngalokhu. Ngizothumela lo mbhalo kuye. Uqinisekile ukuthi uzofunda kahle. Siyabonga ngokwabelana!
I-Theonate ingisiza ngilale ngokujulile.
Kade ngithatha i-600mg ye-Alpha GPC, i-300mg ye-Uridine, ne-2,000mg yeMag L-Threonate njengoba ubuthongo bami bubeka muva nje futhi ibisebenza kahle impela. Kungenza ngizwe ukozela okungu-10-25% ngaphezulu. Ngibuye ngilale ngokushesha okukhulu lapho ngivuka ebusuku.
izinhlelo zobuchwepheshe bokuhlinzwa esibhedlela
Imininingwane ewusizo. Nginenhlanhla ngithole iwebhusayithi yakho ngingahlosile, futhi ngiyamangala ukuthi kungani le ngozi ingenzekanga ngaphambili! Ngibeke uphawu lokubekisa.
Mayelana neMagnesium L-Threonate usebenzisa isikhathi, i-22% ekuseni ne-11% ebusuku isebenza kahle kakhulu.
Uma ngithatha kakhulu kwesinye isikhathi kungaba okuphikisana nokuqonda, imiphumela emihle ingemva kwamasonto ama-2 elandelanayo futhi imvamisa angikwazi ukukusebenzisa ngempumelelo enkulu ukwenza ngcono ukusebenza kwesifiso esisodwa.
Ngibona abantu abaningi bebika imiphumela emibi enjengekhanda, ukulala, amandla aphansi njll.
I-Thiamine iyi-cofactor ye-magnesium, futhi amanani aphezulu we-magnesium anganciphisa i-thiamine, ne-vica-versa.
Zama ukuthatha i-thiamine (B-1) noma ngemuva kwezithako zakho ze-magnesium, bese ubona ukuthi imiphumela emibi isaqhubeka yini.
Kuhle, kepha uma uhamba nazo qala kancane. Uma unezinkinga zokulala nokukhathazeka, i-mag threonate ingahle ikukhulise ekuqaleni. Ngangingeke ngiqale ngesiqalo esinconyiwe ekuqaleni ebhodleleni, okungama-1000 mg 2 amahora ngaphambi kokulala isonto lokuqala. Njengoba lokhu mhlawumbe kuzokugcina uku-haze isikhashana.
Ngithatha ama-1-2gs ngaphambi kokulala futhi mhlawumbe ikepisi elilodwa le-500mg ekuseni uma ngizizwa ngijabule.
Kuyamangaza ukuthi uthola imicabango kule ndatshana nakwingxoxo yethu eyenziwe kule ndawo.
IMagnesium L-Threonate ibangela ukungena kwe-magnesium kusuka esikhaleni esingaphezulu kwamangqamuzana kuya esikhaleni samangqamuzana ezinzwa. Lokhu akwenzeki ngamanye ama-magnesium-salts.
Kungasiza ukulala ngokushesha ngakho kunconywa ihora eli-1 ngaphambi kokulala. Ibhodlela lakho lokungezelela mhlawumbe lifuna amaphilisi ama-3 noma ama-4 ngosuku. Lokhu kungenxa yokuthi i-magnesium threonate inkulu, ingxenye ethandekayo yemolekyuli inkulu. Hlukanisa umthamo usuku lonke ukukhulisa ukumuncwa kepha mhlawumbe ukuhlelisele ukuthi kube nokudla okukhudlwana ngemuva kokudla kwakho kokugcina.
I-L-Threonate ithinta ubuchopho ngqo ngokungafani nezinye izinhlobo ze-magnesium.
Njengoba kuhamba nezinto eziningi ezinomthelela ngqo ebuchosheni kungahle kube nesikhathi sokuzivumelanisa nakho ngakho-ke id isinike isikhathi.
Okwakho konke, okuqukethwe okukhona kule webhusayithi empeleni kuyaphawuleka ngolwazi lwabantu, awu, qhubekani nabafana bomsebenzi omuhle.
Lokho kuphumula kanye nokukhuthaza ngaphezulu kwanoma yikuphi ukuqwasha kwamanje ongakuthola. Yithathe ekuseni kuphela nangesilinganiso esilinganiselwe kusuka manje kuqhubeke.
Ngokuya eMag-L-Threonate, ukuqonda kwami ​​ukuthi i-L-threonate ingumthuthi ophakeme futhi isiza inani eliphakeme le-magnesium ngqo ebuchosheni lapho ingasetshenziswa khona yi-neurons? Kuthiwa izifundo zibonise ukuthi lokhu kuyiqiniso. Angazi noma lokho kuyi-hype kuphela noma cha. Ngingathanda ukuthatha i-L-threonate uma ngingayithola ngobuningi, ngaphandle kwalokho nginamathela ku-chelate.
Mhlawumbe amagremu ama-2 we-magnesium L-threonate, akhiphe i-144mg ye-elemental magnesium.
Ifomu le-Threonate licaciswe kakhulu ebuchosheni futhi mhlawumbe lisebenza kude kakhulu ekukhuliseni okuqukethwe kobuchopho be-magnesium yize line-magnesium engaphansi kakhulu kulo.
Ngaqala ukuthatha umkhiqizo we-Magnesium L-Threonate ebusuku ngaphambi kokulala futhi wow - ngemuva kwezinsuku ezine noma ezinhlanu ngaqala ukuqaphela ukuthuthuka okuncane ekukhumbuleni, ukugcinwa kwedatha ehlukahlukene emsebenzini, kwathi emva kwamasonto ambalwa, kwaba nokuthuthuka okukhulu lapho ngangikwazi khona ukukhumbula amagama namaqiniso kusukela eminyakeni edlule. Ngaphambi kokuthatha lokhu, ngangilwa nokukhumbula okulula kwezinto ezincane nezinkulu futhi kwakuphathelene nokwanele ukuthi ngikhulume ne-PCP yami futhi ngabona nodokotela wezinzwa owangithola ngikhubazekile engqondweni futhi ngaze ngagcwalisa inombolo wezivivinyo ukukhipha i-Alzheimer's.
Ngithatha umthamo onconyiwe wamaphilisi amathathu ahlinzeka nge-144 mg yeMagnesium L-Threonate ebusuku. Lokhu kube ukushintsha impilo kimi.
Umphumela omuhle ohlangothini yilokhu kubonakala sengathi kuthuthukise ukulala kwami ​​futhi ngivame ukukhumbula amaphupho ami manje.
Kade ngithatha i-Magnesium L-Threonate powder cishe izinyanga eziyi-10 manje, i-1.0 - 1.2g nsuku zonke. Ngiyisebenzisa njengesiza sokulala, futhi isebenza ngokumangalisayo. Ngeke ngithi ngibonile noma imiphi imiphumela ngaphandle kwalapho.
I-Magnesium L-threonate iyamangalisa. Ungahle ugoqe igama lomkhiqizo wakwaMagtein. Isula inkungu yobuchopho, iqede ukukhathazeka, ikusize ulale, ikwenze uhlakaniphe, futhi isize ngokudangala. Abazali bami bobabili bakwazi ukuphuma emithini elwa nokucindezelwa ngokushintshela eMagtein. Ngiyisebenzisa nsuku zonke futhi bengingeke ngibe ngaphandle kwayo.
1g-2g ihora elilodwa ngaphambi kokulala. I-500mg yokusetshenziswa kwesikhathi sosuku, uma kudingeka ngokukhathazeka. Ngenye yalezo zinto ezikushaya ngempela uma sekuphelile, okusho ukuthi akukuhle ekukhiqizeni ngenkathi ikuyo kepha ukuthi kuphumuza ingqondo yakho futhi kuvumela izidakamizwa ezenza ukuthi ama-receptors evimba ukuthi asebenze kangcono lapho uMg esewenzile vele umsebenzi. Ingabe lokho kunengqondo? Kungakho ngaphambi kokulala kukhulu kangaka, kubangela ukuthi uvuke unikeze ingqondo yakho ikhefu ekuvuseleleni. Imiphumela iyaqoqeka, kodwa kabi, ngiwuzwile impela umehluko ekuseni ngemuva kokuthi ngiqale ukuyithatha, ngokweqiniso.
Imagnesium eningi kakhulu izodala indle evulekile. Kwabaningi bethu, lokho kungaphezu kwama-200 mg ngosuku. Abanye abantu bangabekezelela ngaphezu kuka-500 mg we-magnesium eyengeziwe ngaphandle kwezinkinga.
Umthamo onconyiwe kimi yi-144 mg ye-elemental (pure) magnesium ngosuku. Abanye abantu bayozela kancane ekuqaleni, abanye babona ukungezwani okwengeziwe kokugeleza kwegazi ekhanda, kanti abanye bangathola ikhanda elincane. T Uma uthatha i-magnesium ukuqunjelwa, ungahle uthande ukuzama ukuqhubeka nomthamo wakho wamanje ngenkathi ungeza iMg Threonate.
Uma uhlakulela izitulo ezixekethile, nciphisa ifomu lakho langaphambilini leMg.
IMagnesium L-Threonate - ube yini isipiliyoni sakho?
Ngabe ukhona lapha obethatha iMagnesium L-Threonate njengesengezo? Kube yini isipiliyoni sakho?
Ubusithathe isikhathi esingakanani futhi ubiza malini?
Kwakunjani ngaphambi kokuthi uqale ukuyithatha, ngenkathi ukuyo, nangemva kokuyeka ukuyithatha uma uyenzile?
Ngicabanga ukuthi umphathi walesi siza usebenza kanzima ukusekela iwebhusayithi yakhe, ngesizathu sokuthi lapha zonke izinto ziyimininingwane esekwe kwikhwalithi.
Ngithola ukuthi iMagnesium L-threonate ingumqondo obandayo futhi ogxile engqondweni, kanti i-glycinate ingukuphumula komzimba.
Kufanele uzame bobabili ngombono wami.
I-Threonate efomini layo le-amino-acid ikhonjisiwe ukuthi isebenza njenge-Acetylcholinesterase inhibitor. Ngakho-ke uma uzwela ngokwe-choline futhi ubona imizwa yokudangala noma eminye imiphumela emibi evela kwizithasiselo ezifana neHuperzine A, i-Alpha GPC, imithamo emincane yamafutha wezinhlanzi, khona-ke ngizoba namahloni ngakwaMag Glycinate.
Ngenxa yezindleko, ngiyeka ukuzama i-magnesium l-threonate iminyaka.
kepha kimi, Ithuthukisa ukulala kwami, into esemqoka ukuthi izinga lokuzola engingalifinyelela ngosuku ngemuva kokukuthatha alinakuqhathaniswa.
Angikaze ngithole noma yiziphi izinzuzo zemizwa / zokukhathazeka ezivela kwezinye izinhlobo ze-magnesium njenge-glycinate, kepha ngokwami ​​ngizithola ku-l-threonate.
IMagnesium L-threonate ingaba ifomu le-magnesium elifanele kuwe uma ufuna ukuthuthukisa impilo yobuchopho ikakhulukazi.
Ngenkathi ingahle ikhulise amazinga e-magnesium kuwo wonke umzimba, imiphumela ingaqina ngokwengeziwe ebuchosheni.
Lezi zinto ziyasebenza, ikakhulukazi isikhathi sokulala nekhwalithi.
Ngizamile ezinye izinhlobo zeMg futhi zivele zinginike ama-run.
Ngithathe iMelatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine, ayikho esebenza ngokungaguquguquki nangempumelelo njengefomu le-L-Threonate leMg.
Okuhlangenwe nakho kwe-Magnesium L-Threonate?
Ngisanda kuthenga iMagnesium L-Threonate futhi angizange ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle ngayo. Ukukhathazeka okuncane, inkungu yobuchopho engaphansi, ngizizwa ngifana 'nami' ngomqondo othile, njll. Ngithatha cishe u-1-1.5g walokhu ngosuku.
Ngicabanga ukuthi ngabe ukhona yini oye waba nokuhlangenwe nakho okufanayo noma okuhlukile ngale ndlela yeMagnesium?
IMagnesium L-Threonate ingenza ngikhululeke futhi isize ukulala kwami.
VULA ISILINGO SELEBHELELE YAMAGNESIUM L-THREONATE KULWAZI NGE-DEMENTIA
E-United States, kunezigameko ezibalelwa ezigidini ezingama-5.2 zeSifo i-Alzheimer's (AD), lapho i-AD namanye ama-dementias athinta cishe umuntu oyedwa kwabadala abathathu. Ngomthwalo okhulayo wezezimali nangokomzwelo wokunakekelwa kweziguli, ukuthola ukwelashwa okuphephile futhi okusebenzayo kubalulekile. Ucwaningo olusafufusa ngemiphumela yokuqonda kwe-Magnesium L-Threonate (MGT) lukhombisa ukuthi ukwengezelelwa kungaba yinzuzo kubantu abane-AD. Yize kunqunyelwe, idatha yesilingo somtholampilo wezilwane neyomuntu ephathelene nemiphumela ye-neural ne-cognitive ngemuva kokungezelelwa kwe-MGT, incazelo yemishini yemiphumela ye-MGT isiqala ukuvela, kufaka phakathi ukuphakanyiswa kwezindlela zokukhomba ze-NMDAR. Isivivinyo samanje selebuli esivulekile sihlolisise imiphumela yokusetshenziswa kwe-MGT ezigulini ezinokuwohloka komqondo okuphakathi kuya kokulingene. Iziguli eziyishumi nanhlanu zathola i-1F-FDG-PET imaging, ukuhlolwa kwengqondo, kanye negazi elidonsela ekuqaleni kanye nasemasontweni e-3 ekwelashwa ukuze kuhlolwe umphumela obukhali wokwengezwa kwe-MGT kumakhono we-hippocampal kanye ne-prefrontal cortex amakhono wokuqonda ahlanganisa nokusebenza okuphezulu, ukunakwa, isivinini sokucubungula , ukukhuluma ngokushelela nokukhumbula. Ukuhlolwa kwengqondo kanye nokudonswa kwegazi nakho kwenziwa ngemuva kwamasonto ayi-18 wokuyekiswa kwe-MGT. Okutholakele kukhombise ukuthuthuka okuphawulekayo kwesimetabolism yesifunda yobuchopho kanye nokwenziwa ngcono kwenkomba yomhlaba yokusebenza kokuqonda kusampula ephelele ngemuva kwamasonto ayi-12 ekwelashwa kwe-MGT. Ukukhuphuka kwamazinga we-red cell magnesium ahlotshaniswa nokuthuthuka kokuqonda okuphelele nokusebenza okuphezulu kwezinye kepha hhayi zonke iziguli. Izilingo zomtholampilo ezinkulu ezilawulwa nge-placebo kufanelekile ukuhlola i-MGT njengesengezo sokwelashwa esisebenza ngempumelelo, esifinyeleleka kalula, futhi esingabizi kubantu abane-AD.
Ukusebenza Nokuphepha kwe-MMFS-01, i-Synapse Density Enhancer, Yokwelapha Ukonakala Kokuqonda Kwabantu Abadala Abadala: Isivivinyo Esilawulwa Ngokungahleliwe, Esiyimpumputhe, Esilawulwa Ngendawo.
Akunankinga kakhulu ukuthola noma yiluphi udaba ku-net uma kuqhathaniswa nezincwadi, njengoba ngithole le ndatshana kule webhusayithi.
Kuyesabeka! I-athikili yayo emangalisa impela, nginombono ocacile maqondana nalokhu kusuka kulesi sihloko.
Magtein (L-threonate) Isikali Umbuzo os
Sawubona, ngiyazibuza ngabantu abake basebenzisa iMagtein noma i-L-threonate phambilini, ukuthi imithamo yabo ibiyini ngosuku, ikakhulukazi uma ijikeleza phakathi kwezinye izinhlobo ze-magnesium.
Njengamanje, ngithatha i- ~ 3600mg ye-glycinate ngosuku (1800mg ekuseni, 1800mg ebusuku). Ngokusho kwelebula, lokho kungaphezu kwe-100% inani lansuku zonke le-magnesium, kepha lelo yidosi engizizwa kahle ngalo, ngoba liqeda amajaqamba amaningi nemisipha.
Ngiyazibuza futhi, ngoba i-2000mg yeMagtein ingama-magnesium angama-36% kuphela nsuku zonke, kanti i-2000mg Magtein yi-MAXIMUM enconyiwe ngosuku, kungenzeka yini ukuthola i-magnesium eyanele kusuka ku-L-threonate, noma ingabe abantu basebenzisa ezinye izinhlobo ze-magnesium ku ngaphezu kwe-L-threonate, lapho uthatha i-L-threonate?
Siyabonga ngosizo. Isikhathi sokuqala ngizama u-L-threonate kimi.
Bengilokhu ngithatha i-ND's Magnesium L-Threonate powder cishe izinyanga eziyi-10 manje, i-1.0 - 1.2g nsuku zonke. Ngiyisebenzisa njengesiza sokulala, futhi isebenza ngokumangalisayo. Ngeke ngithi ngibonile noma imiphi imiphumela ngaphandle kwalapho.
Umthombo Naturals Magnesium L Threonate? IMagnesium L Theronate inelungelo lobunikazi ngakho-ke uma ingeyangempela iMag. Kungaba ifomula efanayo ngokunganaki uhlobo lomkhiqizo oluthengisayo.
I-Magnesium l threonate?
Ngokwazi kwami, i-l-threonate ifomu elikhuthaza i-neurotransmission yokucaca nokugxila. Glycinate for tension muscle / cramp and blood pressure regulation. I-Citrate yokwehlisa futhi ingasiza ngokujwayelekile.
Ngingathola i-citrate ngezimpawu ozichazile.
I-Magnesium iyi-electrolyte ebalulekile emzimbeni wakho ngakho-ke yithole lapho nsuku zonke.